सुहागरातकै दिन बेहुलीले बच्चा जन्माएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा ! के हो वास्तविकता ? — Imandarmedia.com
आज : २०७५ साउन ६ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
सुहागरातकै दिन बेहुलीले बच्चा जन्माएपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा ! के हो वास्तविकता ?
उमेशले बरियारपट्टी गाउँपालिका ३ शिवनगरकी शोभा रामसँग यही माघ २५ मा जन्ती लगेर धुमधामका साथ विवाह गरेका हुन्। तर, उनले विवाहको हरेक प्रक्रिया पूरा गर्दा पनि दुलही गर्भवती रहेको थाहा पाएनन्। बिवाहकै रात दुलहीले छोरा जन्माइन्। त्यसपछि उनी आश्चर्यमा परेका थिए ।
तर, बिहे गरेर घर भित्र्याएकै दिन दुलहीले बच्चा जन्माएपछि गाउँमा मात्र होइन् देश विदेशमा चर्चा चुलिएको छ। यो घटनाले उमेशका परिवार लज्जित बनेको स्थानीय एक युवकले बताए। उनका अनुसार उमेश लाजले घरबाट निस्कन समेत मानेका छैनन् ।
प्रेम गरेर गर्भ बसालेका उमेशका बुबा राजकुमार मोची र शोभाका बुवा रामवली रामले ठूलो गल्ती गरेको निष्कर्ष निकाल्दै समाजले दुबै जनालाई जरिवाना गरेका छन्। युवतीका बुबासँग २ लाख ५० हजार र गर्भवती बनाएका युवकका बुबासँग २ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको उनले बताए।
क्रान्तिकारीको पाटन संयुक्त क्याम्पस इकाइ अध्यक्षमा बम
प्रहरी, तरुण दल र गोविन्द केसीका समर्थकबीच बानेश्वरमा भीडन्त (भिडियोसहित)
माओवादीलाई अहिलेसम्मकै ठूलो सफलता, ३ सैनिक कमाण्डर को मृत्यु, अाधुनिक हतियार कब्जा
इन्टरनेटको मूल्य तोक्न सरकारले बनायो सिफारिस समिति